सहयोगका निम्ति टुँडिखेलमा मनीषा
काठमाडौं-भुकम्प पिडित महिला र बालबालिकाको निम्ति अभिनेत्री मनीषा कोइराला राजधानीको टुँडिखेलमा उनीहरुसंग बार्ता गर्न पुगेकी छिन्।
भ्रमणको क्रममा उनि एक पलभित्र पसिन्। एकछेउमा खोटाङकी नमुना किराँती डेढ वर्षको छोरा आडमा सुताएर टोलाएर बसेकी थिइन् । कोइरालाले कालो चस्मा टाउकोमा राख्दै उनको छेवैमा गएर सोधिन्, 'तपाईंको नाम के हो ? तपाईंका समस्या केके छन्?'
मनीषाबारे नमुनाले पत्तो नै पाएकी थिइनन् । उनले आफ्ना समस्या खर्रर बताइन् । छेउमा दुई वटा बच्चा देखेर मनीषाले फेरि सोधिन्, 'उनीहरूको आमा खोइ ?'
हिन्दी फिल्मको पर्दामा देखिने, टेलिभिजन पत्रिकामा ...
साहित्य बजार ठप्प भयो
काठमाडौँ-फस्टाईरहेको साहित्य बजार विनासकारी भुकम्प र लगातार आईरहेको कम्पनको कारण ठप्प भएको छ।त्रासका वातावरणका बीच दर्शकहरुको पढ्ने मनस्थिति नै खल्बलिएको छ ।
भूकम्पकको कारण थुप्रै कार्यक्रमहरु ठप्प गरिएको छ। यही बुधबार ‘मान्ठा हराएको जुग’ पुस्तकका लेखक मोहन मैनालीसँगै धादिङको जोगिमारा जाने कार्यक्रम पनि स्थगन गर्नुपरेको छ । ‘मान्ठा हराएको जुग’ पढेर नियात्रा लेख्ने पाठकहरुसँग मैनालीको अन्तरक्रिया गराउने, पुस्तकका पात्रसँग भेट गराउने योजना फाइनप्रिन्टले बुनेको थियो । अजितले भने, ‘यस्तो बेलामा रमाइलो गर्न जाने कुरै भएन र जुन ठाउँमा जाने कुरा थियो, त्यो ठाउँमा पनि क्षति ...
मोबाइल शोरूम उदघाटनमा जेनिशा
विराटनगर-बिहीवार भारतीय बजार जोगवनीमा रहेको एक मोबाइल शोरूम उदघाटनमा नेपाली फिल्मकी अभिनेत्री जेनिशा केसीले आफ्नो उपस्थिति दिएकी छिन्। उक्त ठाउँमा दर्शकहरुको लहर लागेको थियो।
विराटनगरबाट सोझै जोगवनी हानिएकी जेनिशालाई मोबाइल शोरूम उद्घाटनलगत्तै माहौल सम्हाल्न गाह्रो भयो । गर्मि धेरै भएको कारण नायिकालाई गारो पनि भएको थियो।
विराटनगरको सीमावर्ती बजार जोगवनीमा झापा, मोरङ र सुनसरीका ग्राहकको दिनहुँ घुइचो लाग्छ । नेपाली उपभोक्ताको भरमा टिकेको भारतीय बजार जोगवनीमा पसलपिच्छे नेपाली ग्राहक देखेर जेनिशा पनि छक्क परिन् । बालाजी मोबाइल प्लाजा नेपाली उपभोक्ताका लागि किनमेल गर्ने चर्चित ठाउँ ...
मनोरंजन गराउदै कोमल पिडितलाई
काठमाडौं–भुकम्प पिडित बालबालिकाको मानसिक स्थिति सैयममा राख्न गायिका कोमल ओलीले ‘म्युजिक थेरापी’ दिइरहेकी छिन् ।सोहि कुराको लागि उनी ती बालबालिकासंग समय बिताई त्यहि अवधिमा उनले बालमनोविज्ञानलाई केन्द्रित गरेर व्यायाम, सांगीतिक प्रस्तुति र अन्तर्क्रिया गरिन्।
उक्त थेरापी दुई घन्टा चल्यो र त्यहाँ डेढ सय हाराहारीमा बालबालिका उपस्थित भएका थिए । ‘विगत १५ दिनदेखि मैले बालबालिका केन्द्रित थेरापी सञ्चालन गरिरहेकी छु । यसले बालबालिकाभित्र भएको डरलाई अन्त्य गर्न सहयोग गरेको प्रतिक्रिया अभिभावकहरुले दिएका छन् ।’ थेरापीमा उनले बालबालिकाको रुचि सोध्ने र गाउन प्रोत्साहित गर्ने गरेकी छिन् । ...
अब प्रियंका अमेरिकी पर्दामा पनि
मुम्बई– बलिउड अभिनेत्री प्रियंका चोपडा अब अमेरिकी च्यानल एबिसीको नयाँ सिरियल ‘क्वान्टिको’मा अभिनय गर्न लागेकी छिन्। बलिउडमा नाम कमाई सकेकी प्रियंका अब बिस्वोमा नै आफ्नो प्रतिभा देखाउने तरखरमा छिन्।
उक्त सिरियल ‘क्वान्टिको’मा उनले अमेरिकी गुप्तचर संस्था एफबिआईको एजेन्ट भएर अभिनय गर्नेछिन् तर सो कार्यक्रमको लागि भने दर्शकले केहि समय कुर्नु पर्ने हुन्छ। गायन प्रतिभा र बलिउडको अनुभवका कारण उनले यो अवसर पाएकी हुन् । सिरियलको ट्रेलर सार्वजनिक भइसकेको छ ।एबिसी च्यानलका प्रमुखले प्रियंकालाई ‘एक आदर्श एबिसी स्टार’ भन्दै स्वागत गरिसकेका छन् ।
सहयोगमा जुटे गायक प्रमोद
धरान–भूकम्प जाँदा अमेरिकामा रहेका गायक प्रमोद खरेल घटना पछिनै नेपालीका लागि फर्किएका थिए। अमेरिकाको सांगीतिक कार्यक्रम यात्रा रोकेर उनको टोली स्वदेश फर्किएको थियो।
भुकम्प पछाडी सबै जना राहतमा जुटेका थिए र प्रमोद पनि।आइतबार साँझ भने उनी धरानको एक सांगीतिक कार्यक्रममा झुल्किए । ‘सधैंजस्तो गीत गाउने, रमाउने माहौल छैन । अरुतिर भए जाने थिइनँ तर यहाँ असहाय र विपन्न बालबालिकाको सहयोगार्थ कार्यक्रम भएकाले आएको हुँ’, भानुचोकस्थित गोर्खा किचनको छतमा आयोजित कार्यक्रममा आउनुको कारण प्रष्ट्याउँदै उनले भने ।
गजल सांगीतिक कार्यक्रम भए पनि माहौल भूकम्पमय बनेको थियो ...
सम्बन्ध बिक्षेदमा अनुराग र कल्की
मुम्बई- निर्देशक अनुराग कश्यप र पत्नी तथा अभिनेत्री कल्की कोच्लिनबिचको सम्बन्धको अहिले किनारा लागेको छ।३ वर्ष देखिन्को उनीहरुको सम्बन्धको हालै अन्त्य हुन पुगेको छ। सन् २०१४ मा छुट्टिनका लागि अदालतमा निवेदन दिएका उनीहरुको निर्णय अदालतले गरिदिएको छ।
अनुराग र कल्कीको भेट सन् २००८ मा फिल्म ‘देव डी’को सुटिङका क्रममा भएको थियो । त्यसयता करिब तीन वर्ष ‘लिभ इन रिलेसनसिप’मा रहेका उनीहरुले सन् २०११ मा विवाह गरेका थिए । तर फेरि तीन वर्ष बित्न नपाउँदै कल्कीले अनुरागको घर छाडेर बेग्लै बस्न थालेकी थिइन् । अभिनेत्री हुमा ...
स्विफ्टले जितिन ८ अवार्ड
क्यालिफोर्निया– यसपालिको बिलबोर्ड म्युजिक अवार्डमा आठवटा अवार्ड जिति गायिका टेलर स्विफ्ट गायनमा अग्रता पाएकी छिन्।उनी अमेरिकामा सबैभन्दा बिक्री हुने गायिकाका रुपमा परिचित छिन् र उनले यसपटक उत्कृष्ट गायिका, टप बिलबोर्ड २०० आर्टिस्ट र वर्षको एल्बम साथै टप सय आर्टिस्ट लगायतका अवार्ड जितिन्।
उनको नयाँ भिडियो ‘ब्याड ब्लड’ पनि त्यहि नै सार्वजनिक गरिएको थियो । प्रशंसकहरुले उनलाई ‘विशिष्ट उपलब्धि’को अवार्ड पनि जिताए ।
‘मेरा लागि यो रात साह्रै राम्रो रात बनेर आयो,’ उनले पत्रकारहरुलाई प्रतिक्रिया दिँदै भनिन्, ‘साथीहरु परिवर्तनलाई अँगाल्नुस्, नयाँ केही गर्दा मलाई स्वीकार्नुस् । ...
घर निर्माण सहयोगमा करिश्मा तत्पर
काठमाडौं– आपतकालीन समयमा नेपाली कलाकारहरुले विभिन्न सहयोग जुटाईरहेको बेलामा नायिका करिश्मा घर निर्माणमा सहयोग गर्ने भएकी छिन्।
एक पत्रकार सम्मेलनमा उनले राजधानीबाट ९ किलोमिटर टाढा रहेको धर्मस्थली चौगाउँमा घर बनाउने जानकारी गराएकि छिन् । उक्त कार्यमा परमशक्तिपीठ नेपाल सेवा समिति र अरु कलाकार पनि सयुंक्त प्रयासमा रहेको उनले बताइन् । परमशक्तिपीठ आफैंमा भने धर्म र अध्यात्ममा लागेको भारतीय संस्था हो । उनीहरुले नेपालमा तदर्थ समिति गठन गरी राहत वितरण तथा पुनःस्थापनामा सक्रियता देखाएका हुन् ।
‘परमशक्तिपीठको प्रस्तावमा हामीले पीडितको पुनस्र्थापनाका लागि घर बनाइदिन लागेका हौं ...
सहयोगमा जुटे धुर्मुस–सुन्तली
सिन्धुपाल्चोक– सिन्धुपाल्चोकको पीपलडाँडामा पुगेर नेपाली टेलिशृंखला ‘मेरी बास्सै’का कलाकार सीताराम कट्टेल ‘धुर्मुस’ र कुञ्जना घिमिरे ‘सुन्तली’ चर्पी बनाउन व्यस्त छन् ।
‘भद्रगोल’का कलाकार सगुन डटकमले पनि सो कार्यमा जुटेका छन् । स्थानीय दलित बस्तीमा यो जोडीले दुई दिनदेखि चर्पी बनाइरहेको छ । चर्पी बनाउन स्थानीयले पनि साथ दिएका छन् । धुर्मुस–सुन्तलीले स्थानीवासीलाई सरसफाइमा जुट्न आग्रह गरे ।
कलाकारले चर्पी बनाएको देखेपछि दंग स्थानीय सागर सापकोटाले भने, ‘कलाकारहरुले गाउँमा आएर चर्पी बनाउँदा गाउँलेलाई आफैँ अग्रसर हुन प्रेरित गरेको छ ।’ भूकम्पबाट यहाँका सबै घर ध्वस्त ...
जीवनले जलाए भूकम्पको पुत्ला
काठमाडौं– भूकम्पको कारण सबै नेपालीहरु त्रसित भएकाले कतै पुजा भईराछ,कतै हवन र यसैगरि हाम्रा नायक जीवन लुइँटेलले भने पुत्ला जलाए।
कलंकीस्थित शिवनगरमा महिला विकास समितिले शुक्रबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा जीवनले भूकम्पको पुत्ला दहन गरेका हुन् । उक्त कार्यले त्यहाँका बालबालिका र महिलामा सकारात्मक प्रभाव परेको छ ।
‘महिला विकास समितिका सदस्यले भूकम्पका कारण महिला र बालबालिका साह्रै आत्तिएको र यसको त्रास गर्न केही गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लागेर पुत्लादहन गर्ने प्रस्ताव गर्नुभयो। सकारात्मक प्रभाव पर्ला कि भन्ने लागेर मैले पनि सहभागिता जनाएको हुँ,’ जीवनले भने ...
एकै फ्लिमको पर्दामा देखिने भए आमिर र ज्याकी
साङ्घाइ-दुई ठुला अभिनेता,चिनियाँ अभिनेता ज्याकी चान र भारतीय अभिनेता आमिर खानले एउटै फिल्ममा अभिनय गर्ने भएका छन्।उक्त फ्लिमलाई दुवै चीन र भारतको संयुक्त लगानीमा बन्ने भएको छ । यसरि संयुक्तमा तीनवटा फ्लिम बन्ने भएको छ जसमा पहिलो फ्लिम हो 'कङ्फु योगा' र यसमा ज्याकी र आमिरले अभिनय गर्नेछन्।
यसै गरि संयुक्त ब्यानरमा बन्ने दोस्रो फिल्म 'बुद्धिस्ट मंक' युआन झ्याङको जीवनमा आधारित रहने र तेस्रो फिल्मको नाम भने 'दा नाउ तियान जु' रहनेछ। चीनमा लोकप्रिय कङ्फु र भारतमा लोकप्रिय योगालाई मिलाएर कङ्फु योगाको नाम जुराइएको हो। ...
सनी लिओनलाई देश निकाला गर्न माग
मुम्बई- बलिउड अभिनेत्री सनी लिओनविरुद्ध अश्लिलता फैलाएको भन्दै देश निकाला गर्नु पर्ने भनेर हिन्दु जनजागृति समिति (एचजेएस) ले उजुरी गरेको छ । सनीको विरुद्ध इन्टरनेटमार्फत मानिसको भावनालाई भड्काउने किसिमका फोटो तथा भिडियो अपलोड गरेको अभियोग लगाइएको छ ।
‘कुछ कुछ लोचा है’ फिल्मलाई लिएर यतिबेला सनी सेन्सर बोर्डको निसानामा समेत परेकी छिन् । यो भन्दा पहिला समाजमा अश्लिलता फैलाएको भन्दै सुरतमा सनी विरुद्ध उजुरी परिसकेको छ । एचजेएसले आइटी एक्टको धारा ६७ र ६७–अ अनुसार उजुरी दर्ता गरेको संचारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । यो धारामार्फत सनी ...
पिडितलाई अन्तरास्ट्रिय कलाकारबाट सहयोग
काठमाडौँ-गायिका सकिराले नेपालका भुकम्प पिडितहरुको सहयोगका निम्ति विश्व समुदायसँग अपिल गरेकी छन् ।उक्त भूकम्पको दोश्रो दिनमा नै उनले आधिकारिक ट्वीटरमार्फत् सबैसँग सहयोगको अपिल गरेकी हुन् । ‘युनिसेफले भूकम्प प्रभावित नेपालका बालबालिका र उनीहरुको परिवारलाई सहयोग गरिरहेको छ । सबैले युनिसेफमार्फत सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ,’ उनले ट्वीटरमा भनेकी थिइन् ।
गायिका शकिराले सन् २००३ देखि युनिसेफको सद्भावना दूतको रुपमा काम गर्दै आइरहेकी छन् । युनिसेफले नेपालमा रहेका बालबालिकालाई शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहयोग गरिरहेको छ । त्यस्तै गत असारमा नेपाल आएका युनिसेफका दक्षिण एसियाली सद्भावना दूत बलिउड ...
हलहरु बन्द भए फेरि
काठमाडौँ-नागरिकहरु बल्ल त्रासबाट टाडिएका थिएका कि २९ गतेको अर्को कम्पनको कारणले गर्दा प्रभावित क्षेत्रका सिनेमा हलहरु ठप्पै भएका छन् । सामान्य क्षति पुगेका हलहरुमा पनि गम्भीर क्षति पुगेको आशंका गर्दै नेपाल चलचित्र संघले बुधबार साँझ विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालभरका हलहरु अनिश्चितकालका लागि बन्द गर्न आह्वान गरेको छ। उक्त अनिक्षित कालीन भनेता पनि १ महिनामा संचालन होला भनेर नेपाल चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष राजकुमार राईले गरे । ‘यो समय भनेको पुनर्निर्माणका लागि हो,’ उनले भने, ‘यसपछि हल सुचारु गर्न सकिन्छ ।’
वैशाख १२ को भूकम्पमा परेका ...
राहतको लागि लाइभ प्रस्तुती
दिल्ली-भूकम्प पीडितका लागि नेपाली कलाकार सहित बलिउडका मल्टिस्टार फराहन अख्तरले लाइभ प्रस्तुती दिने भएका छन्। नेपाल र भारतका विभिन्न ब्यान्ड र गायकगायिकासँगै फराहनले प्रस्तुती देखाउने भएका छन्। वैशाख १२ गते गएको महाभूकम्पबाट नेपाल र भारतका भूकम्प पीडितका लागि सहयोग संकलनका लागि उक्त कार्यक्रम आयोजना हुने बताइएको छ।
उक्त सांगीतिक साँझमा नेपालका अभया एन्ड दी स्टिम इन्जुस, एड्रिन एन्ड फ्रेन्ड्स, अग्नि, विपुल क्षेत्री र भारतका दर्जन बढी कलाकारहरु छन्।
फराहनका अलवा बलिउडका पार्श्व गायिका शिल्पा राव, अहेसान नुरानी, सुशान्त सिंह, इन्डियन ओसियन, जशवीर जसी, जसीन रोयललगायतका ...
First Prev ... 289 290 291 292 293 294 295 Next Last